Bambalwa abesifazane abakhetha ukukhuluma ngokukhululekile mayelana neyinkinga ebucayi njengomoya ovela emzimbeni. Nakuba kunzima ukubiza inkinga. Futhi akusona isici somzimba, kodwa ukukhathazeka kwengqondo. Ake ucabange- isidlo sokuthanda uthando esakhula sibe ukukhulumisana okungathí sina, kisses, ukumbumbana, ukuvuma okuthandwayo, ekugcineni, ukusondelana kocansi futhi lapha ... ngezwi lomlinganiso womugqa othomathikhi, amagesi avela emzimbeni aphuma! Yebo, ngisho nasesikhathini esingenakwenzeka kakhulu. Unamahloni, lo mlingani naye, futhi ngezinye izikhathi uyesaba futhi adidekile, futhi emva kwalesi sigameko uthando lobusuku luphela.
Ngakho-ke, kungani umoya usuka emkhathini futhi ingagweme ngandlela-thile?
Okokuqala, ungesabi impilo yakho. Le nqubo akuyona yonke into emnandi, kodwa iphephile ngokuphelele futhi ibuye ibe nempilo eminingi. Lokhu kusho ukuthi imvelo yenzelwe ngale ndlela - umoya ovela emaseni uphuma, ngoba ayidingi lapho. Ubulili buba mnandi ngesikhathi sokuqala kwe-caresses nokwelula, ukulungiselela ukuthola ipeni. Ngemuva kokulala ngokobulili, konke kubuyela esimweni saso sokuqala, imisipha ejulile ibe yinkimbinkimbi, okusho ukuthi umoya omningi uphinde uphonswe ngaphandle. Ufika lapho ngesikhathi socansi. Ikakhulukazi uma ozakwethu bezishintsha isimo sabo sokuziphatha noma ubulili benziwa endaweni yokuguqa ngamadolo. Kulolu cala, lingena emgodini kusukela "ku-piston", umsebenzi owenziwa yi-penis yesilisa.
Kwenzeka ukuthi umoya ovela emlonyeni uqala ukuphuma ngomsindo emva, isibonelo, ukuzalwa kwengane. Eqinisweni, yaphuma ngaphambi, nje-ke awuzange uyiqaphele, yayingacabangi. Kodwa ithoni ye-muscle iyashintsha futhi ngezinye izikhathi umoya awuzwakali, futhi ngezinye izikhathi kwenzeka ngokukhululekile nangokucacile.
Ungazama ukuhumusha lokhu kube yihlaya, awukwazi ukulalela, kodwa ungenza ukwakha. Ukwakha - akufani nokuqeqeshwa kwemisipha ejulile. Lokhu kuzosiza hhayi nje ukunqoba inkinga yowesifazane - umoya ophezulu ovela emaseni, kodwa futhi ukuqinisa imisipha, ukugcina ukuqina kwawo kanye nezwi, ukuthuthukisa impilo esondelene (njengoba ufunda ukulawula imisipha, uzokunika injabulo ngokwengeziwe kumuntu). Ngokuvamile, thola okuningi amabhonasi kusuka kumzimba obuseduze obunjalo. Zama, ngeke ulizisole!
Ngakho, ukuzivocavoca kokuqala.
Ngesikhathi sokuvuthwa, phazamisa le nqubo. Okusho ukuthi, cindezela imisipha imizuzwana embalwa. Bese uqhubeka futhi. Ungakwenza lokhu hhayi ngesikhathi sokuchama. Zama ukucindezela ubulili njengento eqinile ngangokunokwenzeka. Kwavela? Bamba le nkinga imizuzwana embalwa. Sicela uqaphele ukuthi ukuphefumula akumelwe kulahleke, kuhlale kuhle futhi kuphelile, okungukuthi, njengokujwayelekile.
Ngokunye, cindezela imisipha ye-vagin kanye ne-anus. Yenza lokhu ngokushesha futhi ngesigqi.
Futhi ukuzivocavoca okunye, okuyinto okuzokwenzela hhayi kuphela kuwe, kodwa nakomngane wakho. Yebo, uyiqagele kahle - kufanele yenziwe ngesikhathi sokusondelana. Zama ukucindezela i-penis ngemisipha yesifazane. Nakani - isisindo, hhayi i-perineum. Hlola le nqubo. Manje njengoba unenkinga, cabanga ukuthi umsebenzi wakho ukuphoqa ipeni. Kodwa kuphela ngesisipha esisodwa. Awukwazi ukutshela umlingani ongayisebenzisi nje kuphela ukukhulumisana obuseduze, kodwa nokuqeqeshwa. Nakuba kungekho okuyihlazo kulokhu, thatha njengenhlobo yemidlalo ejabulisayo ukwenza ndawonye.
Futhi ama-squats azosiza futhi. Azinhle kuphela izicathulo zesisu, kodwa futhi nesisu esingaphansi, lapho abesifazane besesinye sezizinda "ezinenkinga" kakhulu. Faka izinyawo zakho ububanzi bamahlombe akho bese ugoqa kancane kancane. Amandla angagcinwa ebhande noma ngemuva kwekhanda. Amaqhubu asakaza kabanzi. Bamba lesi sikhundla ngamasekhondi ambalwa. Ungaqala, uthi, ngemizuzwana eyishumi bese ukwandisa kancane kancane isikhathi semizuzu embalwa. U-Hips, isisu, isisu - konke kuzosebenza, kuqiniswe ithoni.
Ngokuvamile, lowo ofuna, uzothola indlela yokuphuma kwalesi simo esibucayi futhi ngesikhathi esifanayo kuzoqinisa imisipha.
Ubuthakathaka bomsebenzi: izimbangela, imiphumela, izibikezelo
Ukwelashwa kwezidakamizwa kwabesifazane abangenayo i-unkraft: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Art lesidze: Still Life nge Izithelo
2 kweminyaka ethile beshadile: imikhonzo inkosikazi enothando kumyeni wakhe
Pesto. Yini okufanele badle yakudala sauce Italian
War movie "The Storm Gate": abalingisi, izindima, sakhiwo isifinyezo